कोरोनामुक्त पत्रकारको अनुभव: 'आइसोलेसनमा पुगेको दिन बाँच्दिन जस्ताे भयाे' - Nagarik Medi
२०७७ मंसिर २०, शनिबार | Sat, 05, Dec, 2020
कोरोनामुक्त पत्रकारको अनुभव: ‘आइसोलेसनमा पुगेको दिन बाँच्दिन जस्ताे भयाे’
काेराेनामुक्त भएका पत्रकार नवराज कार्की
नवराज कार्की, पत्रकार ।
यी दुवै हल्लामा कत्तिको सत्यता छ त्यतातिर नजाउँ । बरु आफैँले कोरोना संक्रमित हुँदा भोगेका अनुभव यहाँहरूलाई बताउँ । (यस लेखलाई पढ्नका लागि सजिलो होस् भनेर उपशीर्षक राखेर तयार गरेको छु । पढिसकेपछि प्रतिक्रिया दिनु भए आभारी हुने थिएँ ।)
सपनाले बतायो कोरोना भाइरसको संक्रमण
सुतिसकेपछि निद्रामै मैले हनहनी ज्वरो आएको थाहा पाइरहेको थिएँ । ज्वरो कसरी आयो म निद्रामै बेलाबेला सोचिरहेको थिएँ । यसै क्रममा मलाई केही वस्तुले सपनामै थिचेजस्तै भयो । ‘कोरोना लागेछ’ कसैले निद्रामा भनेपछि म आत्तिँदै ब्युँझिएँ । ब्युँझिँदा ज्वरो हनहनी आइरहेको थियो । घरि ज्वरो घटेर पसिना खलखली आइरहेको थियो । आत्मबल पूरै घटेजस्तो लागिरहेको थियो । मसँग थर्मोमिटर थिएन । त्यसैले ज्वरो नाप्ने कुरै भएन ।
छातिभन्दा माथि मात्रै हनहनी ज्वरो थियो । तलतिर म तन्दुरुस्त छु भन्ने भान हुन्थ्यो । अरुबेला ज्वरो आउँदा जिउ फतक्क गल्ने गर्यो, तर यो पटक त विल्कुल फरक थियो ज्वरो । केही घण्टापछि हल्का हातगोडाका मांशपेशी कटकटी खान थाल्यो । सुख्खा खोकी सुरु भयो । घाटी खसखस भइरह्यो ।
सीडीओलाई भनेँ– मलाई देखिएको लक्षण कोरोनाकै हो, क्वारेन्टाइन हालिदिनुस्
मुटु छेउबाट केही चिजले यसरी थिच्यो, अब बाँच्दिनँ जस्तो लाग्यो । भएभरका कोरोनाका सुई ममाथि नै परीक्षण गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो । आधाघण्टापछि त्यो समस्या कम भयो ।
अब मेरो मनमा एउटै सोच आयो- क्वारेन्टाइन गएर बस्छु । त्यस दिन दिउँसो ओखलढुंगाका सीडीओ कृष्ण पौडेललाई फोन गरेँ । व्यस्त रहेको जनाए । बेलुकीपख फेरि कुरा भयो । ‘म त शतप्रतिशत् संक्रमित जस्तै भइहालेँ, अब म बस्ने क्षेत्रलाई जोगाउनुपर्छ भोलि स्वाब लिएपछि क्वारेन्टाइन हालिदिनुपर्यो ।’
ओखलढुंगाखबरडटकम ओखलढुंगाको कोरोना गतिविधि नियमित अपडेट गर्ने अनलाइन थियो । यसले जिल्लाबाट सञ्चालन गरेर पनि जिल्लाकै समाचार दैनिक रुपमा अपडेट गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ । त्यसैले पनि अनलाइनमा केही न केही समाचार लेख्नैपर्थ्यो ।
म आफैँ यस अनलाइनको सञ्चालक/सम्पादक भए पनि कोरोना कहरका कारण कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको थिइनँ । त्यसैले अनलाइन केही साथीभाइको सहयोगमा एक्लैले चलाइरहेको थिएँ । म कोरोना संक्रमित भएर जतिसुकै विरामी भए पनि समाचार लेख्न छाडिनँ ।
कोरोना पुष्टि भएपछि साँझमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसी भट्टराईले फोन गरेर अब केही समय तपाइँका समाचार अनलाइनमा हेर्न नपाइने भइयो भनेर भने । तर म समाचार लेख्न छाड्दिनँ भनेर उनलाई भनेको थिएँ ।
तर तिनीहरुले आफू संक्रमित भएको एकचोटि कल्पना गर्न जरुरी छ । आफू संक्रमित हुँदा के हुँदो रहेछ अनिमात्रै बुझ्छन् । भलै केही छैन । नेपालमा कोरोनाको संक्रमणको दर हेर्दा एकचोटि ती साथीहरूको पनि पालो आउने निश्चित छ । त्यतिबेला हामी कोरोना पूर्व संक्रमितहरूले त ‘गेट वेल सुन’ भनौँला । तर तिनै साथीले तयार गरेको समाजले जसरी हामीलाई व्यवहार गरेको थियो, त्यही व्यवहार उनीहरुलाई पनि नगर्ला भन्न सकिन्न ।
(पत्रकार कार्की ओखलढुंगाबाट एभिन्यूज टेलिभिजन र कारोबार दैनिकमा रिपोर्टिङ गर्छन् । उनी ओखलढुंगाखबरडटकमका सञ्चालक/सम्पादक पनि हुन् ।)
अब सिद्धिचरण नगरपालिकामा फोन गर्दा पैसाे लाग्दैन
नेकपा विवाद: भारुण्ड गति कि धूर्त्याइँ मति ?
किन समातिए काँग्रेस नेता रामचन्द्र पाैडेल तनहुँमा ?
चम्पादेवीमा यसरी बाहिरियाे कहालीलाग्दाे बलात्कार घटना !
नेता दाहालद्वारा स्टेशनरी हस्तान्तरण
चम्पादेवीमा भ्रष्टाचार भएकाे भन्दै नेकपाकाे उजुरी, यस्ता छन् १६ बुँदे अभियाेग
प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिको यस्ताे ‘सल्लाह’
चम्पादेवीमा अखिल र युवा स‌ंघकाे मेल: नेतालाई भने गर्न पाइन्न ‘झेल’
ओखलढुंगाकाे मानेभञ्ज्याङबाट शुरु भयाे राष्ट्रिय परिचय पत्रकाे दर्ता अभियान